2009-12-20 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
virus ​မေး​ခွန်း​အ​တွက် ​ဖြေ​ရှင်း​ချက်
​အာ​ကာ​ဖြိုး : ​အ​ကို​ပေး​လိုက်​တဲ့ hidden ​ဖေါ်​တဲ့ ​ဆော့​ဝဲလ်​က ​အ​ဆင်​မ​ပြေ ​သေး​လို့်​ပါ ​အ​ကို ​ကျွန်​တော် ​စမ်း​ပြီး​ပါ​ပြီိ ​ကျွန်​တော် ​အ​ကို ​မြင်​ရ​အောင် ​လို့​ပါ ​ဓာတ်​ပုံ​ပါ ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် ​ပြန်​ဖော်​လို့​မ​ရ ​သေး​ပါ​ဘူး​အ​ကို​ရေ ​ဓတ်​ပုံ​ကြည့်​ပြီး ​ပြန်​ဖြေ​ပေး​ပါ​အုံး​နော် ​ကိုက်​တဲ့ ​အ​ကောင်​က​တော့ worn32 fancy ​ပါ​အ​ကို ​သူ​သေ​သွား​တော့ folder option ​ထဲ​က show hidden file and folder and show hide system file and folder ​ကို​ဖြုတ်​မှ ​ပြန်​ပေါ်​ပါ​တယ် ​နှစ်​ခု​လုံး​ဖြုတ်​မှ ​ပြန်​ပေါ်​တာ​ပါ ​တ​ခု​ထဲ ​ဖြုတ်​တောင် ​မ​ပေါ်​ပါ​ဘူး ​အ​ကို ...
(၁) virus ​ကြောင့် Tools ​တွေ ​ပျောက်​ဆုံး​နေ​ရင် ​ဘယ်​လို​လုပ်​မ​လဲ
​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး ​မ​သိ​သေး​တဲ့ ​သူ​များ​အ​တွက်​ကို​ပါ ​တစ်​ခါ​တည်း ​ပြော​ပြ​ချင်​တာ​ပါ . ​ဆိုက်​မှာ ​အ​ရင်​က​တည်း​က ​စာ​ဖတ်​မိတ်​ဆွေ​တွေ​တော့ ​အဲ့​ဒီ့ tools ​ကို​သိ​ကြ​မှာ​ပါ . ​ဒါ​က ​မ​သိ​သေး​တဲ့ ​သူ​တွေ​အ​တွက်​ပါ .
virus ​ကြောင့်​ဖြစ်​နေ​တဲ့​ချို့ ​ယွင်း​ချက် (၁၀)​ချက်​ကို ​ပြန်​ပြု​ပြင် ​ပေး​နိုင်​တဲ့ Tool ​ကို ​ဒီ​ပို့စ်​မှာ ​တင်​ထား​ပေး​ပါ​တယ် . ​အဲ့​ဒီ့ tool ​လေး​က​တော့ ​လူ​တိုင်း​မှာ ​ရှိ​ထား​သင့်​ပါ​တယ် . ​နံ​ပါတ်(၁)​အ​တွက် ​အဲ့​ဒီ့​ပို့စ်​နဲ့ ​ဖြေ​ရှင်း​လိုက်​ပါ .
​အ​ပေါ်​က ​ပို့စ်​နဲ့ ​အ​ခု ​ငါ့​ညီ ​ဖြစ်​တာ​နဲ့ ​တော့​မ​ဆိုင်​ပါ​ဘူး . ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​အား​လုံး ​သိ​သွား​အောင်​လို့ ​ပြန်​ပြီး ​ညွှန်း​ပေး ​လိုက်​တာ​ပါ .
(၂) HDD ​ကို Double click ​နှိပ်​မ​ရ​ရင် ​ဘယ်​လို​ဖြေ​ရှင်း​မ​လဲ?
​တစ်​ခြား​သူ​များ​လဲ C: ​နှင့် D: ​ကို double click ​လုပ်​မ​ရ​တာ​မျိုး ​ကြုံ​ဖူး​မှာ​ပါ . ​အဲ့​ဒါ​ဘာ​ဖြစ်​တာ​လဲ​ဆို​ရင် ​ကျွန်​တော်​တို့ ​သုံး​နေ​တဲ့ HDD ​ထဲ​က hidden file ​လုပ်​ထား​တဲ့ autorun ​ဖိုင် ​ကို virus ​က ​တိုက်​ခိုက်​ထား​တာ ​ခံ​နေ​ရ​တဲ့​အ​တွက် Double click ​လုပ်​တာ​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ် ... Open ​နဲ့ ​ဖွင့်​တာ​ပဲ ​ဖြစ်​ဖြစ် ​လုံး​ဝ​မ​ရ​ပါ​ဘူး . ​အဲ့​တော့ ​ကျွန်​တော်​တို့ ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​လဲ ​ဆို​ရင် ​အ​ခု​ကျွန်​တော် ​ပေး​ထား​တဲ့ software ​ကို Download ​လုပ်​ပါ . Explorer xp ​ကို run ​စ​ရာ​မ​လို​ပါ​ဘူး .
(၃) virus ​ကြောင့် ​ဖြစ်​နေ​တဲ့ Hidden file ​တွေ​ကို ​ဘယ်​လို​ယူ​မ​လဲ
​နံ​ပါတ်(၂) ​နဲ့ ​နံ​ပါတ်(၃) ​အ​တွက် ​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး ​အောက်​က program ​ကို ​အ​ရင် Download ​လုပ်​လိုက်​ပါ . ​လုပ်​ပြီး​ပြီ​ဆို​ရင် ​ဒီ​ပို့စ် ​ထဲ​က ​အ​တိုင်း ​လုပ်​လိုက်​ပါ . ​ငါ့​ညီ​ရဲ့ ​ပျောက်​နေ​တယ်​ဆို​တဲ့ ​ဖိုင်​တွေ​ကို ​အ​ကုန်​လုံး​ပြန်​ရ​ပါ​လိမ့်​မယ် . ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​စေ​ငါ့​ညီ .
​ကဲ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​လိုက်​ပါ​ဦး ..